मलेसिया घेदुङले गर्यो जुगल पहिरो पीडितलाई एक लाख भन्दा बढी रकम सहयोग - Saitim Khabar
१ भाद्र २०७७, सोमबार १८:५९
काठमाडौं : नेपाल तामाङ घेदुङ मलेसियाले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगल गाउँपालिका वडा नं. २ लिदि गाउँका पहिरो पीडित परिवारलाई आज नगद सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
मलेसिया घेदुङले संस्थागत रुपमा उपलब्ध गराएको रकम रु. एकलाख ४ हजार रुपैयाँ सिन्धुपाल्चोक घेदुङका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोलाई नेपाल तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष कुमार घिसिङले आज संघीय कार्यालय चुचेपाटिमा हस्तान्तरण गरेको हो ।
उपाध्यक्ष घिसिङले सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै नेपाल तामाङ घेदुङ मलेसियालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोक घेदुङका अध्यक्ष रेसम स्याङ्बोले प्राप्त सहयोग रकम पीडित परिवारलाई समान ढंगले जनप्रतिनिधिको रोहवरमा बितरण गरिने जनाएको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा घेदुङको बिभागिय प्रमुख तथा आइटिसी वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लामा, आइटिसी सचिव रबिन थिङ र युवा घेदुङको केन्द्रीय अध्यक्ष बिलाम मोक्तानको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
साउन ३० गते शुक्रबार बिहान गएको पहिरोबाट लिदी गाउँका दर्जनौ घर पुरिदा ३९ जना बेपत्ता, दर्जनौ घाईते र करोडौं धनमालको क्षेति पुगेको थियो ।